Nala soo xiriir - Gemological Institute of Cambodia
Wadada Suuqa Habeenkii, Siem Reap, Cambodia
Ma u baahan tahay si ay u soo celi Gem ah? jawharad ka dhigaysa mid fudud
Waxaan ku dadaaleynaa qancinta macaamiisha wax walba oo ka sarreeya. Haddii 30 maalmood gudahood laga bilaabo helitaanka dhagaxaaga (s) aad ku qanacsaneyn amarkaaga, waxaad noogu soo celin kartaa annaga oo ah xaalad asal ah oo aan waxyeelo gaarin. GEMS ayaa la soo celin karaa oo keliya inta lagu jiro muddadan kormeerka ah ee 30 maalmood ah.
Fadlan Email GEMIC u dir a Return Authorization Number (orday) Iyo Tilmaamaha noqo dheeraad ah.
FG: Amarka laabtay noo aan orday la diiday doonaa oo ku soo laabtay diraha. Baakadaha iyo maraakiibta ku soo noqo lacagta waxaa mas'uul ka ah diraha. All iibka waa final 30 maalmood ka dib (waxyaabaha ku soo laabtay waa in boostada maalmood 30 taariikhda amarka gudahood lagu helay).
Fadlan ha diido bixinta boostada, aad rabto waa inay kansasho amar ka dib waxaa la geeyey, laakiin ka hor inta uu dhiibay. Haddii amarka la diiday, macaamiisha uu qaadan doono masuuliyada qiimaha buuxa ee waxyaabaha haddii laga badiyay oo dhan eedeeyay dilaalista iyo waajibaadka gashay dul ay laabto.
In wadamo badan, sheegay shixnadaha laga yaabaa in lacagta caadooyinka lagu dabaqi karo iyo canshuuraha. Buyers ayaa ka masuul ah wax kasta oo caadooyinka, canshuurta iyo waajibaadka lagu leeyahay. Dib dhigay sababo la midbaa mid aan la oggolaan karin.
** Dhammaan celinta la sameeyey via habka la mid ah sida lacagta heshay. Shipping, caymiska iyo processing credit card kharashka waa non-celin. Waxaa jira lacag raadreeb ku jirin. No bedelo bixiyeen.
Su'aalo dheeraad ah?
GEMIC waxay ka walaacsan tahay nabadgelyada iyo amniga macaamiisheenna. Waxaan hubineynaa in nidaamka macaamilkeenu yahay mid amaan ah oo macluumaadka macaamiisheena uu sugan yahay.
Dhammaan macluumaadka bixinta iyo kaarka deynta waa la qaban bogga aamin ah by PayPal. Waxaan leenahay ma helaan credit card ama macluumaad maaliyadeed. macluumaadka ammaanka PayPal
GEMIC Laboratory ixtiraamaya macluumaadkaaga shakhsiyeed on website. cinwaanka email Your waxaa loo isticmaali karaa si ku meelgaar ah si ay email ama amar.
Waxaan marnaba iibin doonaa cinwaanka email, qaabka dhirta, ama macluumaad kale oo.
GEMIC waxay isticmaashaa cookies cookies ka biraawsarka si ay u xoojiso booqashadaada ayna awood ugu siiso gaadhigeenna wax iibsiga ee internetka. Macluumaad shaqsiyeed kuma kaydsano buskudka. Kukiyada waa in karti loo siiyaa si ay u helaan dhammaan sifooyinka bartayada.
Su'aal dheeri ah
Waxaad dalban karaa shahaadada markii aad ku dari shay aad gaadhigii. Si arrintan loo sameeyo, riix link "Dar shahaadada jawharad for this item" bogga faahfaahsan sheyga kor ku xusan ee "Dar gaadhigii" button. Tani furi doonaa fursadaha shahaadada.
Dhamaan waxyaabaha aad loogu balan qaadayo at GEMIC. Waxaan hubineynaa inaad marwalba hesho waxa aad bixiso.
Dhamaan baraagaha ku jira GEMIC waxaa loo dammaanad qaaday inay noqdaan sida la sheegay. Shaqaalahayaga khibradda leh waxay si taxaddar leh u baaraan oo u cabbiraan miis kasta.
dhagaxyo Dabiiciga ah
Gemstone kasta oo ka GEMIC waa jawharad dabiici ah oo uu abuuray Dhulka. Kama macaamilno shey-gacmeed ama sheybaar la abuuray "gems".
Waxaad u eeg, maxay Waxaad Hel
sawir jawharad kasta waa jawharad dhabta ah waxaad heli doontaa. Waxaan ha isticmaalin sawiro stock ama sawiro la mid ah dhagaxyo kala duwan.
All dhibcood ka sareeya waxaa la taageeray by our 100% damaanad-dib lacag. Waxaan by GEMS noo taagan, sida macaamiisha noo by taagan.
Fursadaha lacag bixinta iyo siyaasadaha
Hubinta-baxay waa amaan, amni iyo fudud la GEMIC Laboratory.
Waxaan ku siin soo socda hababka lacag bixinta dabacsan ee dhamaystirka aad si:
Bixi by credit card via PayPal (ma account PayPal loo baahan yahay)
PayPal aqbalaa Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, Euro Card, Maestro iyo American Express. macluumaadka ammaanka PayPal.
Bixi la xisaabtaada PayPal
Annagu waannu xubin PayPal xaqiijin.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan ku leedahay xisaabta aad, aad si fudud u furan kartaa koonto cusub adigoo raacaya tilmaamaha ku-screen on.
Bixi by iibsiga Western Union
Marka ay kala iibsiga Western Union bixinta, waxyaabaha aad loo hayo doonaa muddo saddex maalmood ah. Fadlan noo email tirada gaar ah lacag macaamil ganacsi (MTN #) si aad u kala iibsiga. Marka lacag ah ayaa lagu helay, waxaan ka shaqayn doonta si.
Fiiro gaar ah: lacagta Transfer waa in aan laga jaro xaddiga helay.
Bixi by kala iibsiga bangiga tooska ah
Marka ay kala iibsiga bangiga tooska ah bixinta, waxyaabaha aad loo hayo doonaa muddo saddex maalmood ah. Fadlan noo email code bangiga tixraaca kala iibsiga marka aad bilowday bixinta. Marka lacag ah ayaa lagu helay, waxaan ka shaqayn doonta si.
diyaar Marka aad tahay si aad u hubiso-baxay:
Dib aad gaadhigii shopping iyo doorto dariiqada aad maraakiibta. Waxaan bixinaa soo socda laba hab oo maraakiibta iyo heerka; FedEx (Maalmood 3-4)
Standard Worldwide International hab warqado loogu diro hawo (maalmood 10-21)
Riix "sii magalka" oo gala cinwaanka maraakiibta.
Dooro qaabka aad lacagta oo guji "hadda bixiyaan".
Gali macluumaadkaaga biilka, ama daabac shaashadda shaashadda ee xawaaladaha.
Marka amarkaaga si guul leh loo dhigo, waxaad naga heli doontaa xaqiijin emayl ah annaga oo cinwaanka emaylkaaga ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubso inaad ku darto cinwaanka emaylkaaga si loo hubiyo inaad heli karto maraakiibtayada oo aan dalbanno emayl xaqiijin ah. Haddii aadan wax emayl ah naga helin, fadlan iska hubi inaad fiiriso spam-kaaga ama galka emaylka.
Kaarka amaahda iyo lacagaha PayPal waxaa lagu soo dallacayaa lacag kasta. Lacag bixinta iyada oo loo marayo Western Union ama wareejinta bangiga waa in lagu diraa doolarka Mareykanka.
Markaad xulaneyso lacag aan ahayn doolarka Mareykanka, sicirka sarrifka ee maanta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu beddelo qiimaha la muujiyey.
PayPal iyo bangigaaga wax soo saarka (kaarka deynta ee bixiya) waxay isticmaali doonaan sicirkooda sarrifka ah si ay ugu beddelaan lacagaha, sidaas darteed, kharashyada ku jira lacagta aad dooratay waxay waxyar ka duwanaan doonaan qiimaha lagu muujiyay lacagtaas boggayaga.
GEMIC waxay kaa qaadi doontaa oo keliya lacagta la muujiyey. Lacag kasta oo dheeri ah waxay si gaar ah ugu saleysan tahay tan PayPal, kaarkaaga deynta ee soo saaraya siyaasadaha bangiga ama Western Union.
FIIRO GAAR AH OO MUHIIM AH:
Haddii dhibaato kaa haysato bixinta lacag bixinta ama aad jeceshahay inaad ka wada hadashid xulashooyinka kale ee lacag bixinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Fadlan eeg Hoos for Options Shipping our:
Shipping Express - 35 USD
shixnadaha Express caadi ahaan qaadan maalmood 3-4 dhalmo iyo isha loogu hayn karo online tallaabo jid kasta. Baakadaha waxaa si buuxda caymis. Saxiixa A waxaa ku dul bixinta loo baahan yahay. Keenitaanka yihiin Isniinta ilaa Jimcaha inta badan dalalka. No PO sanduuqyada, NUSOJ ama cinwaanada FPÖ (UAE, Saudi Arabia iyo Kuwait mooyee) waxaa loo isticmaali karaa.
Fiiro gaar ah: Haddii aad 'saxiix ku leedahay faylka', fadlan wac EMS si aad ugala noqoto oggolaanshahan. Xirmooyinka la keenayo iyada oo aan la saxiixin, sababo la xiriira 'saxiixa feylka' ma dabooli karo sideheena caymiska.
Standard Registered Mail - 7 USD
Waxaan bixinaa hab warqado loogu diro hawo diiwaangashan in ka badan dalalka 120. mail Registered waa caymis ilaa 200 USD. Shixnadaha qaado maalmood qiyaastii 10-21 shaqeeya iyo waxay u baahan yihiin saxiixa ah ku dul bixinta. Ma jiraan dhalmo Axadda.
Dhamaan jawharadyada la muujiyey sida 'la heli karo' ayaa ku jira kaydka waxayna diyaar u yihiin dhoofinta isla markiiba. Amarada waxaa lagu shaqeeyaa 1 maalin shaqo Isniinta - Jimcaha (marka laga reebo ciidaha)
Wadamo badan ayaa sida saxda ah loogu sheegay shixnadaha waxaa saaran khidmadaha kastamka iyo canshuurta. Waraaqaha diiwaangashan ayaa qaata waqti dheer, laakiin caadi ahaan waxay ka fogaataa khidmadaha dheeraadka ah Waxaan ku faraxsanahay inaan u rarno hadiyad ahaan, laakiin fadlan la soco in aanaan xakameyn karin khidmadaha dheeraadka ah ee ka dhici kara dalkaaga.
Fiiro gaar ah: Canshuurta soo dejinta ama waajibaadka waa masuuliyada iibsadaha. Shixnado la soo celiyey oo loo diiday eedeymahaas awgood lama aqbali karo. Waad nala soo xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay abaabul gaar ah.
Dhammaan baakadaha ka socda GEMIC waxaa ku jira qaansheegad dhammaystiran. Fadlan nala soo xiriir ka hor intaadan dalban amarkaaga haddii aad u baahato qaansheegad qaas ah ama qaansheegad haba yaraatee.
Miisaanka cad ee jawharad midab leh
GEMIC waxay isticmaashaa cabirka cad ee soo socda marka gemstones grading:
IF : Loupe nadiif ah - gudaha hufan; free of inclusions.
VVS : Ku dhawaad ​​loupe nadiif ah - inclusions aad, aad u yar, inclusions dirqi arkay hoos weyneeyey 10x.
VS : Eye nadiif ah - inclusions aad u yar, inclusions yar loo arki karaa by isha tababaran ama hoos weyneeyey 10x.
SI : In wax yar ka mid ah - inclusions yar lagu arki karaa isha oo qaawan.
I : Mid - inclusions loo arki karaa isha oo qaawan.